चीन स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा निर्माता र आपूर्तिकर्ता - JTL धातु
घर > उत्पादनहरु > स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा
Ningbo Haishu Yinjiang Jintangli धातु उत्पादन कारखाना अनुसन्धान र विकास र पालतू पशु उत्पादनहरु को बिक्री मा माहिर छ, विशेष गरी स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा। सबै उत्पादनहरु अनुकूलित गर्न सकिन्छ। कम्पनीको अनुभव र टेक्नोलोजी को धेरै बर्ष छ, सानो मुनाफा तर छिटो कारोबार र गुणस्तर को सिद्धान्त मा आधारित छ, यो गहिरो घर र विदेश मा ग्राहकहरु द्वारा माया गरीएको छ। कम्पनीसँग सबै ग्राहकहरु लाई सेवा दिन को लागी एक राम्रो टीम छ।
हाम्रो स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा परम्परागत फलाम ट्यूब कुकुर पिंजरा बाट फरक छ। यो २०२ स्टेनलेस स्टील, दुई प्लास्टिक ट्रे, र चार पाels्ग्रा (ब्रेक संग दुई) संग बनेको छ। र हाम्रो स्टेनलेस स्टील कुकुर पिंजरा तल दायाँ कुनामा एक खुवाउने ढोका छ, जो घरपालुवा जनावरहरु लाई खुवाउन को लागी सुविधाजनक छ।
हाम्रो स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा स्थापना गर्न सजिलो छ, बिल्ट-इन निर्देशनहरु संग, र यो मात्र १० मिनेट लाग्छ दुई मान्छे लाई यो स्थापित गर्न को लागी। यो पनि सफा गर्न को लागी सजिलो छ, प्लास्टिक ट्रे बाहिर सीधै घरपालुवा जनावर को मलमूत्र सफा गर्न सक्नुहुन्छ।
४५ "भारी कुकुर को लागी भारी शुल्क स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा
४५ "भारी कुकुर को लागी भारी कव स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा भारी कर्तव्य २०२ स्टेनलेस स्टील संग डिजाइन गरीएको छ, तपाइँ तपाइँको कुकुरहरु लाई सुरक्षित र आरामदायक राख्न को लागी एक उत्तम विकल्प। यो पिंजरा एक भारी शुल्क इस्पात फ्रेम, तपाइँ तपाइँको घरपालुवा जनावर सुरक्षित र आरामदायक राख्न को लागी एक सही विकल्प संग विशेष गरी डिजाइन गरीएको छ। प्रत्येक पट्टी दृढता संग बलियो मजबूत निर्माण सुनिश्चित गर्न वेल्डेड छ। अगाडि र अर्को मा एक को साथ डबल ढोका डिजाइन हाम्रो घरपालुवा जनावर को लागी सजीलो पहुँच अनुमति दिन्छ। त्यहाँ अगाडिको ढोकामा एउटा सानो खुवाउने ढोका पनि छ। ग्रेट डिजाइन भुइँ Dirties तल ट्रे मा तल ड्रप गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, घरपालुवा जनावरहरु को लागी एक स्वच्छ वातावरण राख्नुहोस्। दुबै ट्रे सजीलै सजीलो र सुविधाजनक सफाई को लागी तल बाट बाहिर स्लाइड गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, पिंजरा सजीलो सार्न को लागी चार रोलिंग casters संग सुसज्जित छ र ती मध्ये दुई आकस्मिक सार्न बाट बच्न को लागी लक गर्न योग्य डिजाइन हो।
४५ "भारी शुल्क स्टेनलेस स्टील कुकुर चार latches संग कुकुर
४५ "भारी शुल्क स्टेनलेस स्टील कुकुर चार latches संग कुकुर भारी शुल्क २०२ ​​स्टेनलेस स्टील, तपाइँ तपाइँको कुकुरहरु लाई सुरक्षित र आरामदायक राख्न को लागी एक सही विकल्प संग डिजाइन गरीएको छ। यो पिंजरा एक भारी शुल्क इस्पात फ्रेम, तपाइँ तपाइँको घरपालुवा जनावर सुरक्षित र आरामदायक राख्न को लागी एक सही विकल्प संग विशेष गरी डिजाइन गरीएको छ। प्रत्येक पट्टी दृढता संग बलियो मजबूत निर्माण सुनिश्चित गर्न वेल्डेड छ। अगाडि र अर्को मा एक को साथ डबल ढोका डिजाइन हाम्रो घरपालुवा जनावर को लागी सजीलो पहुँच अनुमति दिन्छ। त्यहाँ अगाडिको ढोकामा एउटा सानो खुवाउने ढोका पनि छ। ग्रेट डिजाइन भुइँ Dirties तल ट्रे मा तल ड्रप गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, घरपालुवा जनावरहरु को लागी एक स्वच्छ वातावरण राख्नुहोस्। दुबै ट्रे सजीलै सजीलो र सुविधाजनक सफाई को लागी तल बाट बाहिर स्लाइड गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, पिंजरा सजीलो सार्न को लागी चार रोलिंग casters संग सुसज्जित छ र ती मध्ये दुई आकस्मिक सार्न बाट बच्न को लागी लक गर्न योग्य डिजाइन हो।
४५ '' चार पाels्ग्रा संग भारी शुल्क स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा
४५ '' चार पाels्ग्रा संग भारी शुल्क स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरी भारी शुल्क २०२ ​​स्टेनलेस स्टील, तपाइँ तपाइँको कुकुरहरु लाई सुरक्षित र आरामदायक राख्न को लागी एक सही विकल्प संग डिजाइन गरीएको छ। यो पिंजरा एक भारी शुल्क इस्पात फ्रेम, तपाइँ तपाइँको घरपालुवा जनावर सुरक्षित र आरामदायक राख्न को लागी एक सही विकल्प संग विशेष गरी डिजाइन गरीएको छ। प्रत्येक पट्टी दृढता संग बलियो मजबूत निर्माण सुनिश्चित गर्न वेल्डेड छ। अगाडि र अर्को मा एक को साथ डबल ढोका डिजाइन हाम्रो घरपालुवा जनावर को लागी सजीलो पहुँच अनुमति दिन्छ। त्यहाँ अगाडिको ढोकामा एउटा सानो खुवाउने ढोका पनि छ। ग्रेट डिजाइन भुइँ Dirties तल ट्रे मा तल ड्रप गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, घरपालुवा जनावरहरु को लागी एक स्वच्छ वातावरण राख्नुहोस्। दुबै ट्रे सजीलै सजीलो र सुविधाजनक सफाई को लागी तल बाट बाहिर स्लाइड गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, पिंजरा सजीलो सार्न को लागी चार रोलिंग casters संग सुसज्जित छ र ती मध्ये दुई आकस्मिक सार्न बाट बच्न को लागी लक गर्न योग्य डिजाइन हो।
४५ '' भारी ट्रेड स्टेनलेस स्टील कुकुर दुई ट्रे संग टोकरा गाढा जंग प्रतिरोधी २०२ स्टेनलेस स्टील, बलियो र टिकाऊ, क्षतिग्रस्त हुन कठिन छ, काटेको प्रमाण बाट बनेको छ। बलियो धातु फ्रेम र ढोका न केवल तपाइँ तपाइँको कुकुर संग अन्तरक्रिया गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, तर यो पनि इष्टतम वेंटिलेशन र दृश्यता जो तपाइँको कुकुर एक आरामदायक वातावरण प्रदान प्रदान गर्दछ। भारी शुल्क बलियो कुकुर पिंजरा भारी कर्तव्य धातु, तपाइँ तपाइँको कुकुरहरु लाई सुरक्षित र आरामदायक राख्न को लागी एक सही विकल्प संग डिजाइन गरीएको हो। र घरपालुवा जनावरहरु तपाइँको घर shredding छैन जब तपाइँ बाहिर कामहरु चलिरहेको छ।
४५ '' भारी शुल्क स्टेनलेस स्टील कुकुर एक ढोका संग ढोका
४५ '' भारी शुल्क स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा एक खुवाउने ढोका संग बाक्लो जंग प्रतिरोधी २०२ स्टेनलेस स्टील, बलियो र टिकाऊ, क्षति गर्न को लागी कडा, काट्ने प्रमाण बाट बनेको छ। बलियो धातु फ्रेम र ढोका न केवल तपाइँ तपाइँको कुकुर संग अन्तरक्रिया गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, तर यो पनि इष्टतम वेंटिलेशन र दृश्यता जो तपाइँको कुकुर एक आरामदायक वातावरण प्रदान प्रदान गर्दछ। भारी शुल्क बलियो कुकुर पिंजरा भारी कर्तव्य धातु, तपाइँ तपाइँको कुकुरहरु लाई सुरक्षित र आरामदायक राख्न को लागी एक सही विकल्प संग डिजाइन गरीएको हो। र घरपालुवा जनावरहरु तपाइँको घर shredding छैन जब तपाइँ बाहिर कामहरु चलिरहेको छ।
४५ '' भारी शुल्क स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा
किन हाम्रो ४५ "भारी शुल्क स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा छान्नुभयो? - हामी घरपालुवा जनावरहरुलाई एक आरामदायक घर दिन समर्पित। हामी अनुकूलन र घरपालुवा जनावर आपूर्ति विकास गर्न जारी छ। भारी शुल्क बलियो कुकुर पिंजरा भारी कर्तव्य धातु, तपाइँ तपाइँको कुकुरहरु लाई सुरक्षित र आरामदायक राख्न को लागी एक सही विकल्प संग डिजाइन गरीएको हो। र घरपालुवा जनावरहरु तपाइँको घर shredding छैन जब तपाइँ बाहिर कामहरु चलिरहेको छ। यो २०२ स्टेनलेस स्टील बाट बनेको छ, कुनै जंग सतह मा एक प्रमुख सुविधा/ गैर चित्रकारी डिजाइन कुकुर पिंजरा गैर विषाक्त र हानिरहित सुनिश्चित गर्न को लागी हो! यो किन्नुहोस्, तपाइँको कुकुर एक सुन्दर घर ल्याउनुहोस्
एक पेशेवर चीन स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, यदि म थोक गर्न चाहन्छु, तपाइँ मलाई के मूल्य दिनुहुन्छ? यदि तपाइँको थोक मात्रा ठूलो छ, हामी कारखाना price.You प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भर्खरको बिक्री र हामी बाट चीन मा बनेको उच्च गुणस्तरीय उत्पादनहरु लाई आश्वस्त आराम गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य! हाम्रो उद्धरण कम छ। छुट किन्नको लागी स्वागत छ स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा। अधिक जानकारी को लागी, अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।